Xisaabiyaha: Xisaabi Cabirka ugu Yar ee Sahamintaada | Martech Zone
Sameynta sahan iyo hubinta inaad heysato jawaab sax ah oo aad ku saleyn karto go'aamadaada ganacsi waxay u baahan tahay xoogaa khibrad ah. Marka hore, waa inaad hubisaa in su'aalahaaga lagu weydiiyo qaab aan u xaglin doonin jawaabta. Ta labaad, waa inaad hubisaa inaad sahamiso dad kugu filan si aad u hesho natiijo tirakoob ahaan sax ah.
Uma baahnid inaad weydiiso qof walba, tani waxay noqon doontaa mid shaqaale badan oo qaali ah. Shirkadaha cilmi baarista ee suuqyada waxay ka shaqeeyaan sidii ay ku kasban lahaayeen heer sare oo kalsooni, qalad yar oo qalad ah inta ay gaarayaan tirada ugu yar ee dadka qaata ee lagama maarmaanka u ah. Tan waxaa loo yaqaanaa taada cabirka saamiga. Adiga muunad qaadista boqolkiiba qaar ka mid ah tirada guud ee dadweynaha si loo gaaro natiijo bixisa heer kalsooni si loo ansaxiyo natiijooyinka. Adoo adeegsanaya qaaciido si weyn loo aqbalay, waxaad go'aamin kartaa ansax cabirka saamiga taasi waxay matali doontaa dadweynaha guud ahaan.
Haddii aad ku aqrinaysid RSS ama emayl, guji bogga si aad u adeegsato qalabka:
Xisaabi Cabirka Saamigaaga
Sidee Muunad u Shaqaysaa?
Qaaciddada Go'aaminta Tirada Muunadda Ugu Yar
Qaaciddada lagu go'aaminayo cabbirka ugu yar ee tusaalaha lagama maarmaanka u ah tirada dadka la siiyaa waa sida soo socota:
S = Cabbirka ugu yar ee saamiga ah ee aad sahamin kareyso marka la eego waxyaabaha aad gasho.
N = Tirada guud ee dadka. Tani waa cabirka qeybta ama tirada dadka aad rabto inaad qiimeyso.
e = Xadgudubka Khaladaadka. Markasta oo aad shaybaariso dad, waxaa jiri doona farqi khalad ah oo natiijooyinka ah.
z = Sidee kalsooni ugu qabtaa in dadwaynuhu doorto jawaabta inta udhaxeysa. Boqolleyda kalsoonida ayaa loo tarjumay z-dhibcaha, tirada leexashooyinka caadiga ah ee saamiga la siiyay ayaa ka fog celceliska.
p = Heerka qallooca (kiiskan 0.5%).
Tags: calculatorheerka kalsoonidasahanka macaamiishacalculator onlinecabirka saamigacabirka muunad qaadistasahankalsoonida sahankacabbirka saamigaqayb ururinta sahankasahaminta z-scorez-dhibcaha
E-Ganacsiga Macaamiisha-Koowaad: Xallo Smart ah oo ku saabsan Hal shay oo aanad awood u yeelan karin inuu khalad ku dhaco